I-NZD/JPY yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: NZD / JPY
I-NZD / JPY yehla ngakumbi ukuJonga!
Ukuhlaziywa: 24 May 2021
I-NZD / JPY itshintshe kancinci namhlanje, ke imi kwinqanaba le-78.07 kwinqanaba lokubhala. Ibhalise ukuthengisa okunamandla ngolwesiHlanu kwaye ngoku inyuka ngaphezulu kwenqanaba le-77.93. IJapan Yen inokuphinda ilawule ngokupheleleyo ukuba i-Nikkei iyehla kwakhona.
Ngokobuchwephesha, isenzo sentengo sibonakalisile ukuba isibini sinokuphuhlisa isigaba sokulungisa kwixesha elifutshane. Ikhuphukile ukuphinda ibuye inqanaba lokumelana ngokukhawuleza emva kokufumana inkxaso yethutyana.
I-NZD / JPY iphinde yafumana inkxaso eyi-78.37 eyaphukileyo, umgca we-pitchfork's median line (ML), kunye nenqaku le-pivot yeveki (78.42). Ukubhalisa ukwahlulwa okusebenzayo ngaphantsi kwenqanaba le-77.93 kunokubonisa ukwehla okuthe kratya.
Esi sibini asiphumelelanga ukuzinza ngaphezulu komgca wepligi ophezulu onyukayo (UML) obonisa ukuba iinkunzi zidiniwe. Ukwaphuka kwitshaneli enyukayo kunye nokusilela kwayo ukuphinda ujonge umgca ophukileyo we-downtrend kubonakalise uxinzelelo olomeleleyo.
Okwangoku, i-NZD / i-JPY inokunyusa kancinci kwixesha elifutshane ngaphambi kokuba iphinde iqale kwakhona. Isantsi esisezantsi esitsha sinokuvula ukulungiswa ngokubanzi.
I-NZD / JPY ibonakala ingagqitywanga kwixesha elifutshane, yiyo loo nto inokuhamba ecaleni. Ngokobuchwephesha, ndiyakholelwa ukuba ukuphazamiseka okusebenzayo nge-77.93 static inkxaso, yangaphambili iphantsi kunokubangela ukwehla okunzulu.
Imeko ye-bearish inokungavunyelwa ngumgangatho ophakamileyo omtsha, tsiba ngaphezulu kwe-78.50 nangaphaya komgca ophakathi (ML).
tags NZD / JPY, nzdjpy, Uhlalutyo Technical